2021-2022 Meals / 2021-2022 Meals - Somali
2021-2022 Meals - Hmong
2021-2022 Meals - Spanish
2021-2022 Meals - Somali
2021-2022 Meals - Karen
Meal Box Recipes
Xogta Ilaha Cuntada Bulshada loogu Talagalay
Qaar ka mid ah ururada bulshada ayaa cunto bilaash ah siiyo qoysaska deggan Saint Paul.
Minnesota Food Helpline (Khadka Caawinta Cuntada ee Minnesota)
Wac 888-711-1151 wixii caawimaad ah, Isniinta ilaa Jimcaha 10 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.
Meals on Wheels (Cuntada Wareegta) ee Ramsey County
Waxay bixisaa cunto bilaash ah oo guriga loogu geeyo dadka waaweyn ee deggan degmada Ramsey ee uu saameeyay COVID-19.
Food Shelves in Ramsey County (Meelaha laga Bixiyo Raashiinka ee Degmada Ramsey)
Liiska meelaha laga doonto cuntada ee laga heli karo Magaalada Saint Paul iyo Degmada Ramsey.
Cuntada loogu Talagalay Ardayda Imaaneysa Waxbarashada Qof ahaaneed
Intuu socdo sannad-dugsiyeedka 2021-2022, quraacda iyo qadada waa u bilaash dhammaan ardayda. Ardayda qadada guriga ka soo qaadata waxay kaloo cunto ka heli karaan kafateeriyada. Ardaydu waa inay soo qaataan ugu yaraan 3 shay (sida miro, khudaar iyo caano) si ay u helaan qado bilaash ah. Ardaydu wali waxay si gooni ah ugu iibsan karaan caanaha oo ah $ 0.50. Liisaska cuntada ayaa laga heli karaa schoolcafe.com/spps.
Iskoollada ama barnaamijyada ayaa mid mid u go'aamin doono sida cunnada loogu bixin doono gudaha kafateeriyada iyo/ama fasallada. Ardayda iyo shaqaalaha waxaa laga doonayaa inay xirtaan gafuur-xir marka aysan wax cunayn ama cabeynin. Kuraas ardayga u gooni ah ayaa laga doonayaa inuu ku fariisto xilliga wax la cunayo.
Quraacda uu ardaygu sii qaadanayo (Breakfast to Go) way sii socon doontaa, iyada oo cuntooyin horey loo sii baakadeeyay lagu dhex cuni doono fasalka. Qadada waxaa lagu bixin doonaa weelal dib loo isticmaali karo oo dabool leh halkii lagu siin lahaa saxamadii qadada ee caadiga ahaa. Miisas qoraal lagu dhejiyay ayaa calaamadeyn doono goobaha fadhiga loogu talagalay ee kafateeriyada. Shaqaaluhu waxay la socon doonaan borotokoollada bedqabka leh inta lagu jiro xilliga qadada, oo ay ku jiraan markii safka la gelayo iyo markii fasalka lagu noqonayo.
Qaadashada Cuntada Baakadeysan ee Ardayda Dhigato Online School-ka ee SPPS iyo Ardayda SPPS Markii ay Galaan Karantiil
Cuntada baakadeysan ayaa loo heli karaa arday kasta oo ka diiwaangashan dugsiga Online School ee SPPS iyo ardayda SPPS ay tahay inay ka maqnaadaan waxbarashada qof ahaaneed maadaama ay ku jiraan karantiil ah COVID. Baakad walba oo cunto ah waxaa ku jira shan quraac iyo shan qado. Qoysasku waa inay horey isu diiwaangeliyaan si ay u qaataan cuntada baakadeysan.
Halkan guji si aad isu diiwaangelisid.
Goobta Qaadashada: SPPS Education and Operations Services, 1930 Como Avenue, Saint Paul, MN 55108
Maalinta Qaadashada: Jimce walba, laga billaabo Sept 17
Xilliga Qaadashada: 10 a.m. ilaa 12 p.m.
Carruurtu uma baahna inay goobjoog ahaadaan si ay u soo qaataan cuntada. Fadlan xusuusnow inaad ku dhaqantid kala fogaanshaha dadweynaha (ka fogow ugu yaraan 6 tallaabo dadka kale) oo xiro gafuur-xir marka aad cuntada qaadanayso.
Buuxi foomkan haddii aad horey isu diiwaangelisay oo aad u baahan tahay inaad joojisid ama aad beddeshid tirada baakadaha cuntada.
Wixii su'aalo ama walaac ah, xafiiska Nutrition Services Team waxaa lagala xiriiri karaa:
Taleefan ahaan: 651-603-4950